Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka Kingston USB Drive
Kingston USB Recovery! I CAAWI!
Waxaan leeyahay ka Kingston 4GB qalinka USB drive. Waxa la shaqeeya flawlessly muddo sanado ah. Si kastaba ha ahaatee, waqtigan markii aan geli booska USB computer ee, waxaa i weydiiyo in aan qaab ka hor helaan. Waxaan leeyahay files muhiim ah oo innaba ma aan lumin kartaa. Maxaan sameeyaa? Xogta Ma heli karaa dib aan khasaaro tayo leh?
caawimaad kasta oo la jeclaan lahaa!
Haddii aad aqrinayo dhibaato la mid ah oo aan ka soo shaqeyn karaan, ee ha walwalin, maqaalkan aad ku tusi doonaa sida loo hagaajin in 3 tallaabo.
3 Talaabada inuu ka soo kabsado Xogta laga Kingston USB Drive
Si looga ilaaliyo in asalka xogta, ma tahay in aad u maleeyeen in qaab aad USB drive Kingston, sababtoo ah formatting kiis kasta oo dhaawici kara xogta aad ka badan ama ka yar. Hel xogta aad dib ugu horeysay, ka dibna waxa ay qaab.
Hel Kingston kabashada USB aalad: Wondershare Data Recovery ama Wondershare Data Recovery for Mac .
Labada of USB software Kingston waa xirfad leh oo aamin ah, ayna u oggolaadaan in aad ka bogsato noocyada kala duwan ee macluumaadka ku saabsan USB drive, oo ay ku jiraan waraaqaha, sawiro, videos, music, iyo in ka badan. Weli wanaagsan, aysan aad u baahan tahay si ay u noqon xirfad leh. Xitaa aad bilaabayso kombiyuutar, waxaad soo kaban karto, xogta laga Kingston USB drives gudahood 3 tallaabo.
Download version maxkamada ee xorta ah ee barnaamijka hoose iyo qaato isku day ah oo bilaash ah!
Talooyin: Haddii aad rabto in aad soo kabsado xogta ka dib markii helo xogta lumay, ha xusuusan si loo badbaadiyo natiijada scan, iskaga overwriting xogta asalka ah.
Step1 Burcad Kingston USB qalabka kabashada
Tallaabada mid waa in lagu xiro aad USB drive Kingston in computer ka iyo in la hubiyo waxa lagu ogaan karaa sida warqad drive ee "My Computer" a. Markaas abuurtaan barnaamijka, bedesho "Mode Standard", oo waxaad heli doontaa interface ee soo socda. Dooro "lumay Recovery File" in ay sii wadaan.
Step2 Dooro USB drive Kingston in iskaan
Dooro USB drive Kingston halkan, oo awood scan qoto dheer, taas oo kaa caawin kara inaad wax badan ka buuxda u baadhaan xogta aad. Guji "Start" si ay u bilaabaan iskaanka.
Step3 xogta Kulanka Xiisaha Leh oo ka soo kabsado Kingston USB drive
Scan ka dib, dhammaan faylasha recoverable aad USB drive Kingston waxaa la helay iyo soo bandhigay. Waxaad iyaga ku eegaan kartaa mid mid markaasna aad u hubiso in ay iyaga oo dhan soo kabsadaan ka mid ah.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad lacag bixisid si aad waa dareenka, ma badbaadiyo files soo kabsaday u USB drive Kingston, oo kaliya in ay tixgelin ammaan ah.
Video tutorial ah Kingston kabashada USB
Sidee loo farsameeyo Sandisk SDXC Card Recovery
Ka weyn ka weyn - Maxaa size ah flash ayaad u baahan tahay
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka USB Drive
Habka ugu fiican ee qaab iyo unformat aad flash drive
Dhammaan rabnaa in aad ogaato oo ku saabsan credit card flash drive
Easy Guide of Imation Recovery USB
Sidee inuu ka soo kabsado Data ka Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 Flash eryi
Kingston Flash Drive Recovery, ka Kingston Flash Drive Ladnaansho Data in 3 Talaabooyinka
Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka USB Sandisk Flash Drive
Sida loo abuuro USB Downlaods LiveBoot
> Resource > Flash Drive > Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka Kingston USB Drive